သဒ္ဓါလှိုင်း: September 2010
တပတ်ပြီးတပတ် ကုန်ဆုံးသွားခဲ့သော တနင်္ဂနွေများကို ဖြတ်ကျော်ရင်း ရင်ထဲကို ရောက်ရှိလာတဲ့ အမှတ်မထင်မှုများက ပြန်လို့ အမှတ်ထင်ထင် ဖြစ်လာပြန်ပါကော…။
တခါတရံ တော့လည်း ဘာမှမဟုတ်ပဲ ကုန်ဆုံး သွားခဲ့တယ်..။ တခါတရံတော့ အမှတ် ထင်စရာ အဖြစ်အပျက် တွေနဲ့ ကုန်ဆုံး သွားခဲ့ရ ပြန်တယ်.။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါလေ အမှတ်မထင်ရော.. အမှတ်ထင်စရာ တွေပါ နောက်ဆုံးတော့ ပုံရိပ်လွှာ အဖြစ်နဲ့သာ ကျန်ခဲ့တာ ကိုတော့ ရင်ထဲ တနေရာမှာ ခိုအောင်းနေတဲ့ ပုံရိပ်လွှာ လေးက ဘယ်လိုမှ မငြင်းနိုင်ပါဘူး..။ ပုံရိပ်လွှာလေးကိုပဲ အမြတ်တနိုးနဲ့ သိမ်းထားခွင့် လေး ရနေတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ရမလိုလို..ဖြစ်သေး။
ထုံးစံအတိုင်း မနက် မိုးလင်းတာနဲ့…. ဦးနှောက်ထဲ အတွေး ရောက်လာတာက စာအုပ်တွေ…..
ဖြတ်ဆို ဘေးနားကို ကြည့်လိုက်တော့ ညက ဖတ်လက်စ စာအုပ်ကြီးက ဆီးကြိုလို့..
အော်.. ညက စာဖတ်ရင်းနဲ့ အိပ်ပျော်သွားခဲ့တာကိုးးးးး။
နားရက်လေးမှာ ဘာလုပ်ရမလဲ… စဉ်းစားရင်း စိတ်ကတော့ နေရာအနှံ့ကို ရောက်သွားခဲ့ပြန်ပြီ။ မြန်လိုက်တဲ့ စိတ်…ပါလား…၊ မနည်းလိုက်ဖမ်း… နေရ……..တယ်…၊ သတိနဲ့ ပြန်စုစည်းလိုက်တော့ ထိရှလွယ်တဲ့ စိတ်တစုံသာ ပြန်ရောက်လာခဲ့…ပေါ့ !!!
စိတ်ကို အနားပေးဖို့ အတွက် ညက ဖတ်လက်စ စာအုပ်ကို ယူပြီး ဖတ်နေ လိုက်တော့တယ်…။
ဟင့်အင်းးးးးးးးးးး တခါတရံ မကုန်ချင်တဲ့ နေ့တွေအတွက်… သဘာဝ တရားကြီးကို ဆန့်ကျင်လို့ အိပ်မက် မက်နေလိုက်တာ.။ မကုန်ချင်ပေမဲ့… မရောက်ချင်ပေမဲ့… ပြောင်းလဲနေတဲ့ အချိန် အတိုင်း စီးမြဲ စီးသွားနေတဲ့ ကာလ အတိုင်း လိုက်လံ စီးမျော သွားရတာပဲလေ..။ စီးမျော သွားနေတဲ့ အချိန်လေး တွေကိုပဲ ဘယ်လို ကုန်ဆုံးခဲ့ပြန်ပြီလဲ..။ တန်ဖိုးရှိရှိနဲ့ ကုန်ဆုံး သွားခဲ့တာလား……. ဘာမှ မလုပ်လိုက်ရပဲ ကုန်ဆုံး သွားခဲ့တာလား….. မိမိအတွက်ရော သူတပါး အတွက်ရော ဘာတွေ လုပ်ပေးပြီး ကုန်ဆုံး သွားခဲ့တာလဲ….. `လားးးးးးး´ပေါင်းများစွာနဲ့…….!
ကုန်ဆုံး သွားခဲ့တဲ့ အချိန်တွေ အတွက်… စိတ်ထဲမှာ ကြည်နူးနေခဲ့တဲ့ အရာတွေ ဘယ်လောက်ရှိ သွားခဲ့သလဲ… ၀မ်းနည်းစရာတွေ ဘယ်လောက်များ ရှိနေခဲ့သလဲ…. ၀မ်းသာစရာတွေ ရှိနေခဲ့ပါရဲ့လား…. အားရကျေနပ်မှုရော ရှိခဲ့ရဲ့လား….လို့ ပြန်တွေးကြည့်တော့ ပြန်မရနိုင်တဲ့.. ပြန်လိုချင်ခဲ့တဲ့ အချိန်လေး တချိန်ချိန် ရှိခဲ့တာတော့ သေချာခဲ့ပါတယ်…။ အဲဒီ အချိန်လေးကို ပြန်တမ်းတရင်း ကုန်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေကို နှမြောမိသလိုလို ဖြစ်မိတယ်…။
တဖန် ထပ်ပြီး ကုန်ဆုံးမဲ့ ကာလတွေအတွက် ဘယ်လိုသော အစဉ်အလာ တွေနဲ့ တိုးဝှေ့ပြီး ဆက်မက်ခွင့် ရှိပါသေးသလဲ…!!!
ဆက်မက်ခွင့် ရှိအုံးမယ်ဆိုရင်... ကမ္ဘာမြေပြင်ရဲ့ ဟိုးးးးးးးးးးအဝေးဆုံးကို သွားပြီး ဖြစ်ခွင့်ရမယ့် အရာတွေအတွက် ဘာများ ပေးဆပ်ရအုံးမလဲ ဆိုတာ မေးလိုက်ချင်ပါရဲ့……!
အနည်းဆုံးတော့ ယုံကြည်မှုနဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ယုံကြည်ချက်… ခရီးလမ်း ပန်းတိုင်ကို ရောက်ဖို့အတွက်…၊ ရဖို့အတွက်… ပေးဆပ်ရမယ့် အရာတွေကိုတော့ ပြောပြပေးပါ………!
ပေးဆပ်ရမယ့် အရာတွေ အတွက်လည်း စိတ်ခွန်အား များသထက် များလာစေမယ့် စွမ်းဆောင် နိုင်ခွင့်ကိုသာ ပေးပါလေ..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တနင်္ဂနွေ တရက်တော့ ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြန်ပြီ...!!!!!
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 2:46 PM 32 comments: